Kaabashka | February 2020
Pak-choi: faa'iidooyinka iyo waxyeellada kaabashka Chinese
Kaabashka kaabajka ah ee Chinese-ka ah waa mid khudradeed oo u eg isbinaajiga muuqaalka, iyo arugula dhadhankiisa. Laakiin ha isku qasin. Waxyaabahan waa mid cajiib ah sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa daawada, karinta iyo naqshadeynta muuqaalka. Aan aragno waxa la yiraahdo paki. Dhaqanka Taariikhdaas dhaqankan ayaa muddo dheer caan ku ahaa Shiinaha, Kuuriya, iyo Japan.
Sidee loo beeraa oo u ilaaliyaa kaabash cas
Kaabashka cas waxaa badanaa loo isticmaalaa diyaarinta saladh cusub, sababtoo ah waxay leedahay midab khafiif ah iyo dhadhan kala duwan. Makhaayad xirfad leh, sida khudradda cagaaran waxay ka caawisaa inay siiso soodhaweyn dabacsan oo bariis la karkariyey. Sida diyaarinta jiilaalka of kaabajka cas, waxaa si fiican loo aasaasay in hababka kaydinta fudud.
Meelaha lagu kaydiyo ilaalinta xilliga jiilaalka waa hab wanaagsan oo lagu soo saaro fitamiinada ka hor xilli qabow.Caadi ahaan, mid ka mid ah doorashooyinka ugu caansan waa in la qaado qashin iyo pickle kaabajka, iyo haddii wax badan oo la ogaado oo ku saabsan ugu horeysay, ka dibna qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha labaad ayaa kaliya maleyn kara: wax waliba aad u fudud oo la fahmi karo.
Lix cuntooyin goosashada kaabajka ah ee jiilaalka
Kaabashka ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale khudradda waxtar leh. Xilliga diiran, marka uu kaabajka yar yahay ka soo baxa armaajada, qof kasta wuxuu ku riixaa inuu sameeyo saladh dhadhan fiican leh, si kastaba ha ahaatee, u dhow jiilaalka, dad badan ayaa iskuday in lagu kariyo nooc qashinka ah oo guriga ah oo leh darajooyin kala duwan. In this article, waxaan soo bandhigaynaa dhowr cuntada sida kaabajka leh khal, kala hadal geedi socodka ah ee karinta ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale alaabta waxtar leh, taas oo badan oo u isticmaalaan cuntada ee miisaan luminta.
Waxaa jira cuntooyin badan oo laga helo salfiilaha, kuwaas oo caan ku ah waddamada kala duwan ee adduunka, iyo maaddooyinka qarsoodiga ah iyo waxyaabo qarsoon oo lagu kariyo saxankaan ayaa laga gudbayaa jiilka ilaa qarniga. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa mid ka mid ah cuntooyinka ugu wanaagsan ee laga helo Ukraanriga Georgia, kuwaas oo sii kordhaya iyada oo ay diyaarinayaan hooyooyinka sida diyaarinta jiilaalka ama isticmaalka degdegga ah.
Cuntada dhaqameed ee dabiiciga ah, hooyooyinka intooda badani waxay badanaaba ku beddelaan dhadhankaaga, iyagoo ku daraya dhir kala duwan, miraha iyo miraha. Mid ka mid ah kuwan cusub ee casriga ah waa tandem kaabajka-kelyaha. Si aad u noqoto cunto fiican, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid qarsoonaanta cuntada. Arrintani waxaynu sii wadeynaa wadahadalka. Kaabashka Tani waa ka fiican tahay in laga qaato noocyo kala duwan ee kaabajka cad, hostess waayo-aragnimo ah si fudud u doorato mid ka mid ah in ku habboon for dhanaan ama salting.